အမေရိကားနေထိုင်သူများ – Listeria-canteloupe အသီးစားလျှင် သတိထားပါ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » U.S. News » အမေရိကားနေထိုင်သူများ – Listeria-canteloupe အသီးစားလျှင် သတိထားပါ…
အမေရိကားနေထိုင်သူများ – Listeria-canteloupe အသီးစားလျှင် သတိထားပါ…
Posted by kai on Sep 30, 2011 in U.S. News |5comments
အဲဒီအပေါ်ကပုံမှာပြထားတဲ့အသီး.. မြန်မာလို..ပဲခူးသခွားသီးခေါ်မလား. ဂျပန်သင်္ဘောသီးခေါ်ရမလားမသိ..အဲဒါစားသူတွေ..ဖျားနာသေနေကြတာမို့.. သတိပေးတဲ့သတင်း တင်ပေးတာပါ..။
Thursday, September 29, 9:38 AM
The listeria outbreak that has killed up to 16 people and sickened more than 70, could get worse according to health officials, who are still in the process of trying to determine where contaminated cantaloupes might have been shipped. As AP reported : Federal health officials said Wednesday more illnesses and possibly more deaths may be linked to an outbreak of listeria in cantaloupe in coming weeks.
ဟုတ်တယ် သခွားမွှေးသီး မှ သခွားမွှေးသီး အစစ်.. ဟိုတလောက တရုတ်ပြည်မှာ ဖရဲသီးတွေ အပင်ကနေ အလိုလို ကွဲထွက်တယ်တဲ့ .. ဆေးများသွားတယ်ပြောတယ်.. ဟိုတလောက အနောက်နိုင်ငံများမှာ အီကိုလိုင် ပိုးတွေ့တယ်တဲ့.. အခု သခွားမွှေးတဲ့ …
Englishလိုတော့ Honey Juice လို့လဲတချို့ကခေါ်တဲ့ဟာလေ။
အပေါ်ဆုံးက ပုံကြီးကို ကြည့်ရတာ ရှောက်သီးကြီးနဲ့ တူတယ် … အနောက်ဆုံး ပုံကိုကြည့်တော့မှ သခွားမွှေးဖြစ်နေမှန်းသိတယ် … ဒီနှစ်တောတွင်းမှာ သိသိသာသာ ဈေးကွက်ထဲဝင်လာတာတွေ့ရတယ် … ။
အ၀ါသီး ရှိတယ် .. အစိမ်းသီးရှိတယ် … ။ မာဆတ်ဆတ်နဲ့ .. ချိုမွှေးမွှေး အရသာ ရှိတယ် :D
ခွားတွေနား သိပ်မကပ်နဲ့ 
( Jme သီချင်းစာသားကို ပြင်ရေးပါသည် )